Yan Aung: ဖုန်ကန်ရာဇီ အလွမ်းပြေ…
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ… နဲ့ နောက်တစ်ပါတ်ထဲကို ရောက်လာပြန်ပြီ.. အချိန်တွေကလည်း ကုန်လွယ်လိုက်တာဗျာ. ဒါမှမဟုတ် အချိန်တွေကုန်သွားတာကို စောင့်ကြည့်ဖို့ သတိမရနိုင်လောက်အောင်ပဲ ဖြစ်နေခဲ့တာလား။ တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ။
ဒီနေ့မနက်ခင်း အိပ်ယာကနိုးတော့ ကျောင်းရဲ့ email ၀င်စစ်ကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူပြန်လာမယ့် Professor တစ်ခြားကိစ္စရှိလို့ Conference ကို သွားနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်း၊ လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဟိုမှာ ညအိပ်မှပဲ အဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း၊ လိုက်မလိုက် အမြန်ဆုံး အကြောင်းပြန်ပေးပါဆိုတဲ့ အကြောင်းဖတ်လိုက်ရတယ်။ အင်းပေါ့လေ. ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ စိတ်ကို အသာလေး ဒိုင်လျှိုချော့မော့ပြီး “I’m afraid I won’t be able to make it, Professor..” လို့ရိုက်၊ send နှိပ်လိုက်ရတယ်။ ရင်နာနာနဲ့ မေ့ပစ်လိုက်ဆိုတာ ဒါမျိုးနဲ့တူပါတယ်။
သိပ်မကြာပါဘူးဗျာ. ဘော်ဘော်တွေ Online တက်လာကြပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ နည်းနည်းလောက် ပွားနေလိုက်သေးတယ်။ သူငယ်ချင်းမလေးတစ်ယောက်က ကချင်လိုသင်ပေးတယ်ဗျ။ စောစောစီးစီးမို့လားမသိပါဘူး။ မှတ်ဥာဏ်ကလည်း ရေရေလည်လည်ကောင်းနေတယ်။ သူသင်ပေးတာတွေကို လိုက်မှတ်လိုက်တာ A4 တစ်ရွက်ခွဲစာတောင် ရလိုက်တယ်။ ကချင်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် ရေးမလို့ နည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲ တတ်အောင်သင်မယ် စိတ်ကူးထားတာ တကယ်ကို စိတ်ပါသွားတယ်ဗျာ…
ကောင်းတော့လည်းကောင်းပါတယ်လေ. Lဆိုင်းဇီလေးကို ကချင်လိုမိတ်ဆက်လို့ရတာပေါ့။ ရေဗက္ကာဝင်းကလည်း ကချင်မလေးပဲမဟုတ်လား။ တတ်ထားတာ အရှုံးမရှိပါဘူး။ နောင်တစ်ချိန် အသုံးချခွင့် ကြုံလာနိုင်တာပဲလေ..
Kaja nga ai i (ကဂျာ ငါ အိုင်အိ) --- နေကောင်းလား
Kaja ai (ကဂျာအိုင်) ---- ကောင်းတယ်
Ngwi pyaw shana rai u ga (ငွီပျော် ရှနာ ရိုင်းအုဂါ) - ကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေ
Ngai Myanmar kaw nga ai (ငိုင် မြန်မာ ခေါငအိုင်) - ကျွန်တော် မြန်မာပြည်မှာ နေပါတယ်
ကချင်လို ကျွန်တော်၊ငါ ကို Ngai (ငိုင်) လို့ပြောတယ်။ သင် (You) ကိုတော့ Nang (နန်) လို့ပြောတယ်တဲ့။ Ai (အိုင်) ဆိုတာကတော့ “တယ်” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ စာကြောင်း အဆုံးသတ် “သည်” လိုမျိုး စကားမှာ ပြောတာပေါ့။ မေးခွန်းမေးရင်တော့ i (အီး) လို့ စာကြောင်း အဆုံးမှာ ထည့်ပြောတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် “အီးပေါင်းတစ်ထောင်တတ်ရင် ကချင်စကားတတ်ပြီ” လို့ ပြောကြတာလေ…
ကောင်းတာကိုတော့ Kaja (ကဂျာ) တဲ့။ Very (အရမ်း)ဆိုရင်တော့ Grai (ဂရိုင်) တဲ့ဗျ.
ဒါဆို ကျွန်တော်ရေးပြထားတဲ့ ၀ါကျလေးတွေကို နားလည်ရောပေါ့
ဘာမေးလိုက်တယ်? ချစ်တယ်ကို ဘယ်လိုပြောလဲ ဟုတ်လား။ ထင်ပါတယ်၊ ဒီမေးခွန်းမေးတော့မယ်လို့. ကချင်စကားမသင်ခင်ကတည်းက ချစ်တယ်ဆိုတာကို ရေဗက္ကာဝင်း သီချင်းထဲမှာ ကြားဖူးပြီးသားဗျ. ဘာတဲ့
“နန်ဖဲ့ငိုင် စောရအိုင် … နင့်ကို ငါချစ်တယ်.
တတ်အောင် သင်ကွယ် တို့ ဂျိန်းဖောစကား
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ကျေးဂျူးကမ္ဘာဆိုင်ရော…” တဲ့ဗျာ.
ခေါင်းလေးကို ဟိုခါသည်ခါ၊ လက်ညှိုးလေးကို ဟိုထိုးသည်ထိုး၊ မျက်လုံးလေးကို ကစားပြီးတော့ ကချင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ဆိုသွားတာ ဘယ်မေ့လိမ့်မလဲဗျာ…
နန်ဖဲ့ (မင်းကို) ငိုင်(ငါ) စောရ (ချစ်) အိုင် (တယ်)
အဲဒါကို နည်းနည်းလေးကွန့်လိုက်မယ်ဗျာ. ကိုယ်မင်းကို အရမ်းအရမ်းကို ချစ်တယ်။ ရေရေလည်လည်ကြွေနေပြီဆိုတာကို ကချင်လိုပြောချင်ရင်
နန်ဖဲ့ငိုင် ဂရိုင်း စောရအိုင်…
ယောင်္ကျားလေးက ဖွင့်ပြောတာဆိုရင်တော့ ဆေးမိထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ မျက်လုံးလေးကို တစ်ဝက်လောက်မှေးပြီးပြော…မျက်လုံးလေးတော့ သွားမကစားနဲ့နော်. တစ်ခုခု အမှားအယွင်းတွေဖြစ်သွားရင်တော့ ကိုရန်အောင်ကြီး ဒီလို သင်ပေးလိုက်တယ်လို့ ဘော်လီဘော မပုတ်လိုက်ပါနဲ့. တစ်ခုခုဖြစ်လာရင်လည်း ကျွန်တော်ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့
Ngai nang hte grai tsan ai kaw nga ai
ငိုင် နန် ထဲ့ ဂရိုင်းဆန် အိုင်ခေါ ငါ့အိုင်
ကျွန်တော်က ခင်ဗျားနဲ့ အဝေးကြီးမှာ နေနေရတဲ့ သူမို့ပါဗျာ…
Grai Tsan (အဝေးကြီး)
Ai kaw (မှာ)
Nga ai (နေတယ်)
ကျွန်တော်လည်း ဆက်စဉ်းစားတာပေါ့. မြန်မာမှာ စောရ ဆိုတာ သူခိုးကို ပြောတာ. တကယ်လို့ သူခိုးကြီး ငတက်ပြားသာ ကချင်မလေး အိမ်ကို တက်ခိုးရင် ကချင်မလေးက ”စောရ ငတက်ပြား စောရ ငတက်ပြား” လို့ အော်မှာပဲနော်. ငတက်ပြားကိုချစ်တယ်လို့ ခုနစ်သံချီ ဟစ်နေမယ့် ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် မြန်မာကချင် ချစ်ကြည်ရေး ရာဇ၀င် တွင်သွားနိုင်တယ်.
ကချင်လိုသင်နေရင်းနဲ့ ရီစရာတစ်ခု ဖြစ်သွားသေးတယ်။ စကားလုံးတစ်လုံးတည်းမှာပဲ အသံထွက်မတူရင် အဓိပ္ပါယ်ကွဲသွားတယ်ဆိုတာကို သူကပြောပြပါတယ်။ ဥပမာတဲ့ wa (၀ါ့) လို့ ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောရင် father ကို ပြောတာတဲ့. Wa (၀ါ) လို့ အသံကို ခပ်နှိမ့်နှိမ့် ပြောရင်တော့ pig (၀က်) ကို ပြောတာတဲ့ဗျာ. Wa (၀ါး) လို့ အသံကို နည်းနည်းလေး ရှည်ရှည်လေးပြောလိုက်ရင်တော့ (come - လာသည်) လို့ ဆိုလိုပါသတဲ့ဗျာ..
ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်းလောက် ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့. ဒီစကားလုံးသုံးလုံးကို sentence တစ်ခုလောက်လုပ်ပြီး မှတ်ထားရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီး ဒီလို မေးလိုက်ပါတယ်
“အဖေ့ဝက် ပြန်လာပြီ” ကို ဘယ်လိုပြောမလဲ.
ရီပါတယ်ခင်ဗျာ. အားရပါးရကို ရီပါတယ်။ ပြောရဦးမယ်။ ရီတာကတော့ ဘာသာစကားမရှိဘူးဗျ နော်. အားလုံး တစ်ပုံစံတည်းပဲ ရီကြတယ်။ မကောင်းဆိုးဝါးတောင်မှ ရီရင် Formula ရှိသေးတယ်။
၀ူးထွားဟားလား… ၀ါးထား….. တဲ့
(ငယ်ငယ်တုန်းက အဲလိုမျိုး ရီလိုက်ရင် ကောင်မလေးတွေ လန့်ပြီးပြေးတာပဲ. ခုတော့ အဲလို ရီပြတာတောင်မှ သွားတက်လေးနဲ့ ချစ်စရာလေးလို့ ပြောတဲ့သူက ပြောနေတော့ မခက်ဘူးလားဗျာ. ဒါက စကားချပ်ပါ…)
အဖြေကို သူမ တစ်ချက်စဉ်းစားပြီးတော့ ခုလိုပြောပါတယ်
Wa na wa bai wa ai
၀ါ့ န ၀ါ ဘိုင်း ၀ါး အိုင် တဲ့.
အဲဒီ့မှာ na (န) က “ရဲ့” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်တဲ့…
ကျန်တာတွေကိုတော့ ဆက်သင်လိုက်ဦးမယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ တွေ့ရင်လည်း ပြန်ပြောမယ်ဗျ သိလား.
ဩော်. သတိပေးဖို့ ကျန်သေးတယ် တစ်ယောက်ယောက်ကများ ကိုယ့်ကို နန်ဖဲ့ငိုင် စောရအိုင်လို့ ပြောရင် Chyeju kabar sai yaw လို့ မပွင့်တပွင့်လေးပြုံးပြီး ပြန်ပြောဖို့ မမေ့နဲ့နော်..
ဒါကတော့ ကချင်ရိုးရာ အကလေးတွေပါ.. ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဗျ…
Model ကောင်မလေးနာမည်က Yup Seng Ing တဲ့. ချစ်စရာလေးပဲ. တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားများကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်အောင် လေ့ကျင့်သင်ယူနေတာပါဗျာ. တစ်လွဲမတွေးပါနဲ့
Kachin Ma is singing love song in Burmese. I like it.
The second one gives culture and natural beauty. I've never been there. I'll try to visit next summer, as it is not too far from Mdy.